Zvimwe Zvipatara Zvoramba Kubatsira Vanofungidzirwa Kuti Vane Coronavirus
Kurume 11, 2020
Vamwe vanachiremba munyika kuzvipatara zvakaita seWest End neParirenyatwa vari kuramba kubatsira vanhu vanofungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus vachiti havana zvikanisiro nehunyanzvi hwacho.
Nemusi weMuvhuro vamwe vanamukoti vakaratidzirawo vachiti kuchipatara cheMpilo vachitiwo havana zvikwanisiro zvekuzvidzivirira mukutapurirwa chirwere ichi.
Vanoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezvehutano, Dr Portia Manangazira, vakaudzawo Studio7 kuti mumwe mudzimai ari chizvarwa cheZimbabwe ainge abva kunyika yeChina akatadza kurapwa kuParirenyatwa nenyaya iyi.
Chipatara cheParirenyatwa chakazoita ongororo yenyaya iyi chikabuda nechisungo chekuti hachisi kuzotora murwere wezvirwere zvakaita secoronavirus chichiti vanhu vakadai vanofanira kuendeswa kuWilkins Hospital neBeatrice Infectious Hospital sezviri pamutemo senzira yekuyedza kudzivirira kuti vamwe varwere navanachiremba pachipatara ichi vasatapurirwe coronavirus.
Chipatara ichi chinotiwo chichagadzira tende panze pechipatara kuongorora vanenge vachifungidzirwa kuti vane chirwere ichi vobva vaendeswa kune zvipatara zvinonzi zvine hunyanzvi izvi.
Mukuru anoona nezvehutano mukanzuru yeHarare, Dr Prosper Chonzi, vanotiwo chipatara cheWest End chakaramba kubatsirawo mumwe mudzimai wekuChina akazoguma ashaya chichifunga kuti ane chirwere checoronavirus asi iye asina.
Hurukuro naDr Prosper Chonzi
Patafonera chipatara ichi chati titumire mibvunzo asi tange tisati tawana mhinduro pataenda kumhepo.
Vanhu vanosvika zviuru zvina nemazana matatu nemakumi masere nevaviri vafa nechirwere ichi pasi rose.
China ndiyo ine vanhu vakawanda vafa ichiteverwa neItaly neIran. MuAfrica mafa vanhu vaviri kuEgypt neMorocco.
Asi nyika dzabatwa nechirwere ichi muAfrica dzinosvika gumi neimwe dzinoti Algeria, Burkina Faso, South Africa, Senegal, Tunisia, Togo, Egypt, Cameroon, DRC, Nigeria ne Morocco. South Africa ine vanhu gumi nevatatu vabatwa nechirwere ichi.